शीर्ष नेताहरू नमिल्दा कांग्रेस दुईवटा जस्तो लाग्छः विनोद खनाल (अन्तर्वार्ता) – kalikadainik.com
शनिबार, जेठ १९, २०७५ | १५:३१:४४ |
पुस्तौँदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय विनोद खनाललाई केन्द्रीय नेतृत्वले कहिल्यै पनि मूल्यांकन गर्न सकेन । सर्लाही जिल्लामा कांग्रेसको खम्बा बनेर बसेका खनाल दुईवटा संविधानसभा र एउटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा टिकतका लागि सिफारिसमा परे । तर, केन्द्रबाट उनलाई टिकट दिइएन । सर्लाही जिल्लामा उनी लोकप्रिय नेताका रुपमा चिनिन्छन् । खनालले विद्यार्थी जीवनबाटै सक्रिय राजनीतिमा होमिएका हुन् । नेता खनालले ०३० सालमा थुनामै रहेका बेला एसएलसी परीक्षा दिएका थिए । ०६०/०६१ सालतिर उपसभापति भएका खनाल अहिले भने महासमिति सदस्य छन् ।
खनालका हजुरबुवा जीवनाथ खनाल ०३४/०३५ सालतिर नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको जिल्ला सभापति भएका थिए । त्यसपछि खनालका काका अशोक खनाल पनि जिल्ला सभापति भएर कांग्रेस हाँकेका हुन् । अशोक खनालका बारेमा वीपी कोइरालाले आफ्नो बयानमा समेत उल्लेख गरेका छन् । उनै विनोद खनालसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीद्वारा गरिएको कुराकानी :–
कांग्रेसले निर्वाचनमा नराम्रोसँग हार्नुको कारण के होला ?
कांग्रेस हार्नुको मुख्य कारण व्यवस्थापन राम्रो नहुनु हो । पार्टीमा काम गरेरका र लोकप्रिय नेतालाई टिकट नदिएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । वीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजाबाबुले कांग्रेस संरक्षण गरेभन्दा भिन्न तरिकाले पार्टी चलाउन खोज्दा नेता कार्यकर्तालाई चित्त बुझेको छैन । यो पनि हारको एउटा कारण ठान्छु ।
कांग्रेस किन यति धेरै कमजोर भयो ? कांग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन सकिँदैन ?
कांग्रेस कमजोर भएको होइन । सुरुमा पनि मैले भनेको छु । कांग्रेसभित्र व्यवस्थापनको समस्या हो । संगठनका लागि राम्रो काम गर्ने र इमान्दार नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय नेतृत्वले नचिन्नु नै समस्या भएको छ । आफ्नालाई मात्रै काखी च्याप्ने परम्पराको अन्त्य भयो भने कांग्रेसले फेरि पनि नयाँ जीवन पाउँछ । कांग्रेसलाई माया गर्नेको कमी छैन । सानो प्रयासले कांग्रेस फेरि पनि दुबो मौलाएझैँ मौलाएर आउँछ ।
कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त छाडेर पराजय भएको हो कि ?
त्यस्तो होइन । कांग्रेसले सिद्धान्त छाडेको छैन । मुख्य कारण भनेको व्यवस्थापनमा कमजोरी छ । काम गरेका नेता तथा कार्यकर्ताको पहिचान गर्न कमी भएको छ । व्यक्तिगत पदीय स्वार्थका कारण पनि पराजय भएको हो । वैचारिक भिन्नता छैन ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई हाँक्न सक्नु भएन भन्ने आरोप छ नि हो ?
त्यसरी भनिहाल्ने अवस्था त छैन । तर, नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले जस र अपजस दुबै लिनुपर्छ । सभापति देउवाको पनि समस्या छन् । होलान । उहाँले आफ्नो कमजोरी के–के भएको छ भनेर सुधार गर्नुपर्छ । कांग्रेसलाई मिलाएर लैजान आवश्यक पर्ने पहल कदमी लिनुपर्छ । पार्टीभित्रको समस्यालाई मिलाउने दायित्व र जिम्मेवारी सभापतिको हो । आलोचना र समर्थन दुबै हुन्छ । आलोचना भयो भने मान्छेले सुध्रिने मौका पाउँछ । सभापतिलाई पनि सुध्रिने मौका आएको छ । संगठन मजुबद बनाउने समय आएको छ ।
सभापति देउवा कहाँ–कहाँ चुक्नुभयो ?
निर्वाचनको मुखमा सकेसम्म कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नचलाएको भए हुन्थ्यो । आइजीपी, प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग जस्ता प्रकरणले कांग्रेसलाई केही हदसम्म नोक्सानी भएको छ । सभापति पनि चुक्नुभएको छ । उहाँलाई सहि सल्लाह दिनेहरूको कमी भयो भन्ने लाग्छ । तैपनि केही बिग्रिएको छैन । जे हुनु थियो भैसक्यो । अब मिलेर जानुको बिकल्प छैन । जहाँ चुकेपनि हामीलाई जनताले पाँच वर्ष सत्ताभन्दा बाहिर बसेर कम्युनिस्टहरूका गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्न आदेश दिएका छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वले कार्यकर्ता र तल्लो तहका नेतालाई किन चिन्न सकेन ?
अहिलेका जनता र मतदाताहरू ०१५ सालका होइनन् । सचेत छन् । सामाजिक सञ्जाल छ । रेडियो, टिभी, अनलाइनहरू छन् विश्व परिवेशमा के छ भनेर एकैछिनमा थाहा हुन्छ । केन्द्रका कुरालाई कार्यकर्ताले छिनछिनमा हेरेर बसेको हुन्छ । शीर्ष नेताले के गरेका छन् भनेर हेरेका हुन्छन् । के कुरा गलत छ । के कुरा सहि छ भन्ने आफै विचार गर्न सक्छन् । समयलाई बुझेर कांग्रेस नेतृत्व चल्न नसकेकै हो ।
सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच टकराव छ नि ?
पार्टी चलाउने उहाँहरू मिलेर नै हो । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल मिल्नुपर्छ । अन्य कार्यकर्ताहरू पनि मिल्नुपर्छ । कुनै समस्या छ भने मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । घरभित्रको कुरालाई बाहिर लैजानु हुँदैन । होइन भने दुश्मन हाँस्छन् । त्यो वातावरण बन्न दिनु हुँदैन ।
कांग्रेस त दुईवटा भइसक्यो भन्छन् ?
शीर्ष नेताहरू नमिलेको देख्दा कांग्रेस दुईवटा भएको जस्तो लाग्छ । आफ्नै कांग्रेसभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अवस्था छ जस्तो लाग्छ । मन्त्री हुँदा पनि आफ्नो समूहको नहुँदा काम गराउन समेत अफ्ठ्यारो महशुस हुन्छ । एमाले र माओवादीलाई काम गर्न लगाए जस्तो हुन्छ । तर, नेताहरू मिल्ने क्रममा छन् । छिट्टै पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति हुन्छ ।
कांग्रेस विधानले चल्न नसकेको हो ?
विधान सबैले मान्नुपर्छ । कांग्रेसको संगठनलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । भातृ संगठनको अधिवेशनहरू समय गर्नुपर्छ । विभाग गठन भएको छैन । पदाधिकारी दुई वर्षपछि भयो । पार्टी चुस्तदुरुस्त रुपमा चलेको छैन । सभापति आफू पनि विधानभित्र रहेर हिँड्नुपर्छ । होइन भने समस्या आउँछ ।
बलियो कांग्रेस बनाउन अब के गर्नुपर्छ ?
पार्टीलाई जीवन्त तुल्याउन नेतृत्व सच्चिनुपर्छ । नेतृत्वको बीचमा एकता र सहकार्य हुनुपर्छ । युवालाई जिम्मेवारी दिने । गाउँका मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । असली कार्यकतालाई काममा लगाउने हो भने कांग्रेस आफ्नो ठाउँमा आउँछ ।
एमाले र माओवादीको मिलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एमाले–माओवादीको एकताले कांग्रेसलाई बेफाइदा भएको छ । कांग्रेस मिल्नुपर्ने बाध्यतामा आएको छ । संगठन गर्नुपर्ने भएको छ । कांग्रेसलाई तत्कालमा भन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा हुन्छ । नेकपा अण्डरलाइनमा सबै मान्छे अट्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिको एउटा धार बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि आउँछ ।
कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको हो ?
यो कुरा मन्न म तयार छैन । कांग्रेस आफै कम्जोर भएको हो । कमजोर भएपछि कम्युनिस्टहरूले पेल्नु पर्दैन । उनीहरू मिलेको हो ।
निर्वाचनमा कांग्रेस हारेको हो कि हराइएको हो ?
नेतृत्वभित्रको घरझगडाले कांग्रेस हारेको हो । कसैले हराएको होइन । हामी फेरि एक पटक मिलेर जितेर देखाइदिन्छौँ ।
मधेस केन्द्रीत दलहरूसँग कांग्रेसको सम्बन्ध कस्तो छ ?
नराम्रो छैन । राम्रो छ । सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सात वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने बेला मधेसी मूलका दुईजना कांग्रेसीलाई नियुक्त गरेको भए के बिग्रिने थियो ? तर, मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना दुईजनालाई प्रदेश प्रमुख बनाए । कांग्रेस हेरेको हेरै । तैपनि प्रदेश २ मा कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल मिलेका छन् ।
संगठन बनाउन गाउँ जानै पर्ने भयो है त ?
नयाँ कार्ययोजना र विचार लिएर कांग्रेसका युवाहरू गाउँमा प्रवेश गर्नुपर्छ । वीपी कोइरालाका कुरा मात्रै जपेर मान्छेले पचाउँदैनन् । सञ्चारको विकास भइसकेको छ । जनतामा सचेतना आएको छ । अहिलेका मान्छेलाई म्याच हुने गरेर कार्यक्रम लिएर गाउँमा जानुपर्छ । पहिलो कुरा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू मिल्नुपर्छ । कांग्रेस नेताहरू पदको दुरुपयोग गरेका कारण पार्टी हारेको हो ।
कांग्रेसमा सुधार आउला ?
खै भन्ने अवस्था छैन । यही ताल हो भने कांग्रेसका केही नेताहरू सुध्रिने सम्भावना छैन ।